Indlu Ejabulisayo Enhliziyweni Yedolobha LaseSilver
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Kacie
I-COZY & CLEAN 2 -igumbi lokulala, igumbi lokugezela elingu-1 elitholakala enhliziyweni yeSilver City. Ukuhamba ibanga ukuya eWestern New Mexico University, Downtown, Restaurants, Galleries, Library, Farmers Market, nokuningi! Nethezeka kuvulandi oyimfihlo futhi ujabulele ukushona kwelanga okuhle kwe-NM. Ikhishi elihlome kahle elinefriji entsha nomshini wokuwasha izitsha. Izitezi zangempela zokhuni oluqinile kulo lonke, isitoreji esakhelwe ngaphakathi, indawo yomlilo yegesi kanye nezinhlamvu eziningi. Uzozizwa usekhaya kule ndawo ethule nephephile ogwadule oluphakeme.
Lesi sikhala sinokunyakaziswa okuhle futhi ilethe iminyaka eminingi yenjabulo kubanikazi, abaqashi, futhi manje abakwa-Airbnb... ngaleyo ndlela baqanjwe ngokuthi "Indlu Ejabulisayo".
Iningi lomakhelwane lakhiwa ngeminyaka yawo-1800 futhi kunezindlu eziningi zomlando ezithakazelisa ngokwezakhiwo ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. I-Silver City inamagugu ezimayini anothile kanye nedolobha elinempilo elibonisa umlando namasiko. I-Happy House iseduze nemizila yokuhamba ebheke idolobha kanye nekhempasi enhle yaseWestern New Mexico University.
Umnikazi wekhaya akasekho esimweni, kodwa umsingathi ungowasendaweni futhi ujabule ukukusiza ukuhlala kwakho kujabulise ngangokunokwenzeka. Umninikhaya ubehlala eHappy House unyaka nesigamu futhi ujwayelene kakhulu nekhaya nezindawo ezizungezile. Umsingathi uyabuhlonipha ubumfihlo besivakashi futhi uzotholakala ngocingo noma ngombhalo ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi nokuhlala okunethezekile.
Umnikazi wekhaya akasekho esimweni, kodwa umsingathi ungowasendaweni futhi ujabule ukukusiza ukuhlala kwakho kujabulise ngangokunokwenzeka. Umninikhaya ubehlala eHappy House unyaka…
UKacie Ungumbungazi ovelele